Mety bilaogin'ny orinasanao ve raha miankina amin'izany ny fiainanao? | Martech Zone
Mety bilaogin'ny orinasanao ve raha miankina amin'izany ny fiainanao?
Alakamisy 15 martsa 2007 Zoma, Desambra 15, 2017 Douglas Karr
Misy ny olona sasany izay mieritreritra fa ny mpitoraka bilaogy dia alefa ao ambany lakandranonay miaraka amina boaty pizza misokatra sy Mountain Dew na aiza na aiza. Misy fomba fijery hafa momba ireo bilaogera izay mety tsy ho fantatrao. Ireo bilaogera dia olona ara-tsosialy maniry fatratra ny fifandraisana (ary indraindray ny fifantohana!).
Androany, nanao fivoriana mahafinaritra tamin'ny maraina aho niaraka tamin'ny olona vitsivitsy avy Saina maranitra. Nanana fotoana nifanakalozana hevitra momba ny zavatra niainako tamin'ny fitorahana bilaogy niaraka tamin'ity vondrona ity aho ary nanome fomba fijery vitsivitsy momba ny paikadin'ny bilaogy orinasa. Noraisina tsara ilay lahateny ary nankafiziko kely izany.
Ny zavatra mahavariana amin'ity lahateny ity dia avy tamin'ny fanaovana bilaogy izany rehetra izany. Ny olona nanatrika dia avy amin'ny profesora lohan'ny departemanta ao amin'ny Ball State University ka hatramin'ny solontena IT iray amin'ny orinasa mpamokatra entana. Natahotra kely aho - liana be izy ireo, manam-pahalalana ary mirotsaka an-tsehatra (Tena Sharp Minds!). Tsy ho nihaona tamin'ireto olona ireto aho raha tsy nanao bilaogy.
Nanomboka nibilaogy aho. Nanampy an'i Pat Coyle aho avy eo nitoraka bilaogy. Niara-nanomboka ny bilaogy misokatra izahay ho an'ireo olona any Indianapolis hitantara ny antony tian'izy ireo ny tanàna. Pat nihaona tamin'i Ron Brumbarger, filoham-pirenena ary CEO Vahaolana Bitwise ary niresaka momba ny fitorahana bilaogy. Ron dia nitarika ny sain'i Sharp Minds mba hiara-hientana amin'ireo olona ao amin'ny faritra mba hiady hevitra momba ny haitao ary nihevitra fa ny Blogging Corporate dia lohahevitra lehibe ho resahan'izy ireo. Ka niara-nisakafo atoandro tamiko i Ron sy Pat ary nanangana azy izahay.
Avy amin'ny fanaovana bilaogy daholo.
Nisy ny fotoana mety ho an'ireo mpanatrika rehetra ary ny maro tamin'ny mason'izy ireo no nazava. Ny sasany nanoratra pejy naoty. Nahita loha nihatokatoka aho (angamba iray noho ny fahasosorana 😉 - tsy ny rehetra no faly amin'ny fanaovana bilaogy toa ahy). Fotoana nahafahana nanararaotra ary vondron'olona mahafinaritra mba hiadian-kevitra momba io teknolojia io.
Ny ankamaroan'ny resaka dia mifototra amin'ny tahotry ny orinasa handray io dingana io - lehibe io. Toy ny fandraisana andraikitra lehibe rehetra dia mitaky paikady sy torolàlana vitsivitsy ao anatin'ny orinasa iray ny fanaovana bilaogy. Vita tsara, hanosika ny orinasanao sy ny tenanao ianao ho mpitarika mieritreritra ao amin'ny indostriao, ho voalohany amin'ny microphone amin'ny resaka manodidina ny vokatrao, ary manangana fifandraisana manokana amin'ireo mpanjifanao sy ny vinavinanao.
Heveriko fa ny iray amin'ireo zava-nisy tonga taminay dia ny ilain'ireo orinasa mandray sy mandray teknolojia vaovao fa tsy atosiky ny tahotra ao anatiny. Ohatra iray amin'izany Ny fandraràn'i Kent State ny atletan'izy ireo tsy handefa ao amin'ny Facebook. Alao an-tsaina izany raha nanana ny fahafahan'ny administratera mandrisika sy manara-maso ny fihetsiky ny atleta tao amin'ny Facebook fa tsy. Tsy ho loharanom-pahalalana fandraisana mpiasa mahafinaritra ve izany? Izay raha ny hevitro.
Rehefa niresaka tamin'ny profesora avy ao amin'ny Ball State aho dia nieritreritra fa hahafinaritra tokoa ny mahita bilaogy Freshman amin'ny Internet, manabe ny mpianatra amin'ny lisea amin'ny fiainam-pianaran'ny Kolejy, tsy eo an-trano, ary ny zavatra niainana momba ny fahalalahana sy ny oniversite. Bilaogy mahery izany!
Ary koa, ny bilaogiko nampiditra ahy tao amin'ny Indiana Humanity Council Androany alina izay nihaonako tamin'i Roger Williams, filohan'ny Ivon-toerana fitarihana vao misondrotra. Mampiasa tambajotra sosialy i Roger mba handrindrana sy hananganana ny vondrom-piarahamonin'ireo tanora mpitarika ao aminy. Oay!
Nihaona tamin'ny solontena avy koa aho Fanampiana ireo veterana sy fianakaviana tsy manan-kialofana, fikambanana tsy mampino izay manampy ny veteranina tsy manan-kialofana hiverina amin'ny tongotr'izy ireo amin'ny alàlan'ny fandaharanasa torohevitra sy fikarakarana maharitra. Manana mpitsoa-ponenana 140 tsy manan-kialofana izy ireo amin'izao fotoana izao, manome sakafo, fialofana, fametrahana asa, sns.
Nahagaga ny firehetam-po tamin'ireto tsy mitady tombom-barotra ireto ary nampahery ahy ny fahitan'izy rehetra ny fotoana mety amin'ny teknolojia. Nisy dichotomy iray teo amin'ireo vondrona roa ireo. Ny vondrona maraina dia nanana orinasa mahomby izay liana amin'ny teknolojia vaovao ary, angamba, somary mitebiteby kely momba izay mety haterak'ireo fanamby vaovao ireo. Ny vondrona hariva dia noana tamin'ny teknolojia manaraka izay hampifandray azy ireo amin'ny olon-kafa haingana sy mahomby kokoa.
Heveriko fa rehefa ny raharaham-barotrao dia ny mitahiry Vet na mitady ny sakafo manaraka ho an'ny olona noana iray, izay teknolojia rehetra manampy dia tsara.
Tags: vahaolana bitwisefitorahana bilaogybilaogy orinasampitondra vaovaoveterana tsy manan-kialofanaIndianapolisfanjakana kentpat coylesaina maranitra
Tsy misy miraharaha ny bilaoginao!
Ny Chat Blog mora indrindra ho hitanao na aiza na aiza!